မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Shining Inheritance မင်းသားလေးနဲ့ Swine Flu
Posted by mabaydar at 4:06 AM
Flu Flu Flu လူတိုင်းမကင်းကြပါလားး)
ဟုတ်တယ်နော်... Celebrities မို့ ရိုးရိုးလူနဲ့ မတူးဘူး တော့မဟုတ်ဘူး... သူတို့လဲ လူထဲက လူတွေပါပဲ...
11/12/2009 10:14 AM
Seung Gi, Please recover quickly. Yoona will worry about you. :(
And Swine flu attack many celebrities. :(
And please beware of Lee Teuk(Super Junior) and Brian(Fly to the Sky). They are trying to take Yoona from you. :P Come back to Kang Shim Jang(Strong Heart) and fight with them. :D :D
စိတ်မကောင်းပါဘူး ... အမြန်နေကောင်းပါစေ လို့ ....
Kim Hyun Joong was also attacked by Swine flu??
yes...kim hyun joong contracted swing flu in Sept: when BOF promo: in Japan. now, he is fully recovered.
ဟုတ်ပါတယ်.. မဗေဒါရယ် !_!
၁၁ရက်နေ့ညကဆို စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ သူ့သတင်းတွေပဲ လိုက်ရှာဖတ်နေတာ။
အခုတော့ recover ပြန်ဖြစ်နေပြီဆိုပဲ။
သူ့ရဲ့ 2days 1 night (Happy Sunday) variety show လည်းအရမ်းကြိုက်တယ်။ မဗေဒါ သိပြီးသားလားတော့ မသိဘူး။ လူ ၆ ယောက်ခရီးထွက်တာ။ သူ့တို့ဆီမှာတော့ အဲဒီ့ show က popular ဖြစ်တယ်တဲ့။
11/13/2009 10:58 AM
Yes.2days and 1 night is very good variety show. The MCs are very good and funny. If you like variety shows, aslo try to watch Strong Heart. Very funny. MCs are Kang Ho Dong and Lee Seung Gi.
The day after tomorrow ဇာတ်ကား ဘယ်မှာ ဒေါင်းရမှာပါလိမ့်။
ဟဲ ဟဲ ရမ်းရှာလိုက်တာ။ တွေ့သွားပြီ။
ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ အားရင် ကြည့်လိုက်ဦး မဗေဒါရေ။